Samsung kwupụtara ọkwa Otu UI 3.1 maka Galaxy S20, Galaxy Note 20 na 15 ụdị ndị ọzọ | Gam akporosis
Samsung ka gosipụtara otu mmelite UI 3.1 maka ngwaọrụ 17 nke Galaxy akara, si otú mee ngwangwa ijeụkwụ mmelite. Onye mbụ na-enweta ụdị nke cape ahụ ọ bụ Samsung Galaxy S20 FE, ngwaọrụ ọkọnọ na ọnwa Septemba na nke ahụ Ka anyị jiri ya tụnyere iPhone 12 na iPhone 12 Mini.
Ọbịbịa nke nsụgharị a na-atụ anya nke ọma na-abịa akụkọ nke Galaxy S21 akara, ngwaọrụ nke bịara Galaxy S20 ịga nke ọma. Companylọ ọrụ ahụ mara ọkwa na ekwentị ịnata ụdị a bụ: Samsung Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A51, Galaxy A71, Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold, Galaxy S20, Galaxy Note 10 na Galaxy Note 20.
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ na-ekwupụta na nkwupụta ahụ Otu UI 3.1 ga-abịarukwa ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dị n'etiti na nke dị elu n'ime izu ole na ole sochirinụ. Ọ bụ ihe dị mkpa n'ọsọ ahụ iji nye ndị ahịa gị ihe kachasị mma na ekwentị ndị nwere otu UI 2.5 na karịa.
1 The 17 kpọmkwem ụdị
2 Mmelite amalite ịbịaru taa
The 17 kpọmkwem ụdị
Nọmba ọnụ ekwentị nwere dị ka ndị a: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 +, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note Ultra, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A90, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A70 na Samsung Galaxy A50.
Iji One UI 3.1 abịa ton nke atụmatụ ọhụụtinyere ngwa mwepụ ihe, Single Take, Google Discover dị ka nhọrọ desktọọpụ, gallery ọhụrụ maka onyonyo na vidiyo, ndekọ ndekọ ọdịyo nke otu oge, yana Onwe Gị. Ha bụ ụfọdụ ọrụ dị iche iche enwere ike iji rụọ ọrụ ozugbo imelite.
Ọ bụ otu n'ime mmelite ngwaọrụ a na-echere ogologo oge nke ga-eme ka ọ dị mkpa ịgba ọsọ na ụdị ọhụrụ ahụ yana ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa ga-enwe ike ịnụ ụtọ ya. Otu UI 3.1 buru ụzọ rute na smartphones atọ nke Galaxy S21 usoro, ka emesịrị tinye ya na ekwentị ndị ọzọ nke ika ahụ.
Mmelite amalite ịbịaru taa
Site taa na izu ndị na-abịanụ mmelite ahụ ga-erute mba dị iche iche, dabere na mgbe ọ bụla na mba na onye ọrụ. A ga-ekwupụta mmelite ahụ site na ozi, ọ bụ ezie na enwere ike chọọ ya aka na Ntọala> Sistemụ na mmelite> Mmelite ngwanrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung kwupụtara mmelite One UI 3.1 maka Galaxy S20, Galaxy Note 20 na 15 ụdị ndị ọzọ
Otu esi emepụta ụzọ mkpirisi na gam akporo Auto